Mgbawa Mbanye Inbound | Martech Zone
Mgbawa Inbound Marketing
Fraịde, Machị 23, 2012 Monday, September 23, 2013 Douglas Karr
Dịka inbound ahịa gị n'ụlọnga, anyị chere na ọ bụ ihe na-akpali akpali na-elekọta mmadụ na n'ihu n'akụkụ nke ịrịba mgbanwe na gị n'ụlọnga ụlọ ọrụ. Site na ndị na-ere ahịa na ndị na-emepụta ihe, onye ọ bụla na-etinye nnukwu uche na nnukwu foto nke azụmaahịa n'ịntanetị kama ịrụ ọrụ na silos ma ọ bụ mpaghara nkasi obi. Rụ ọrụ n'ofe ndị na-ajụ ase na-enye nsonaazụ ka ukwuu… mana ọ dịghị mfe!
Azụmaahịa na-abụ maka ịkwụ ụgwọ maka uche ndị na-ege gị ntị na ịnwa ịrafu ha n'ihe ọ bụla ha na-eme na mbụ. Ma ekele web, egwuregwu agbanweela. Inbound Marketing gụnyere ọtụtụ ụzọ aghụghọ na-adọta ndị ahịa site na ịnye ha ozi bara uru, dị mkpa. Iji inbound marketing, ị nwere ike ghara ịbanye na ndị ahịa dị njikere ịzụta ihe ị na-ere. Anyị na-enyocha otu ọnụọgụ ahịa inbound si nwude na etu azụmaahịa si enweta ihe ịga nke ọma na ya 2012. Site na ozi G +, Ngagharị nke Inbound Marketing.
Tags: ịde blọgụkpọmkwem okporo ụzọinbound marketingmbido peeji nkeedu ọgbọahia n'èzíakwụ ụgwọ ọchụchọAelekọta mmadụ media
Akara agba nke Web
Na enyi m na-egosi njedebe nke oge na isi ezigbo ala nke onye ọzọ. Social media bụ buzzword… ya na anya ụlọ ọrụ na-enubata na ya dị ka seagulls ka sandwiches.
Echere m na ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ na-eto n'agbanyeghị, anyị ga-ahụ mgbanwe nke azụmaahịa. Iji rụọ ọrụ na usoro ọhụụ ọhụrụ a, ị ga-abụrịrị mmadụ. Ulo oru a adighi eji ya buru ndi mmadu… ujo ha. Ha gha muta idi ma obu ha gha anwu. Plain na mfe.
Mar 28, 2012 na 10: 17 AM
Ndị na-azụ ahịa achọghị ka ọ dị ha ka a na-ere ha ahịa. Inbound marketing bu banyere isonyere mkparita uka, kama ibido ya. Ndị na-eri ihe nwere mkpa ga-anwa ma chọọ azịza ya. Rụ ọrụ na ahịa inbound na-eme ka ohere ị ga-abụ bụrụ ihe ngwọta ahụ ka mma.
Mar 28, 2012 na 10: 35 AM
N'etiti eserese a - akara mmado ezighi ezi? Ọpụpụ bụ ala, Inbound bụ elu?
Echere m na ị ziri ezi! @freighter hụrụ ya ozugbo anyị zipụrụ ya (whew… anyị emeghị nke ahụ!).